RASMI: Iker Casillas oo qandaraaska u kordhiyey kooxdiisa FC Porto – Gool FM
(Porto) 20 Maarso 2019. Goolhaye Iker Casillas ayaa heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxda FC Porto, waxaana uu xusay inuu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doono kooxdan.
Casillas ayaa qalinka ugu duugay kooxda Porto heshiis ku eg illaa sanadka 2021-ka, waxaana uu sheegay inuu xirfaddiisa ciyaaraha sare ku soo gabagabayn doono kooxda.
Xiddigan 167 kulan u saftay xulka qaranka Spain ayaa bisha May 38-sano jirsan doona waxaana heshiiskan cusub uu yahay hal sano oo loogu kordhiyey qandaraaskiisa isagoo sidoo kale dooq u haysta in mid kale lagu sii daro heshiiskiisa, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa da’diisa 40-ka sano markaasoo Casillas uu sheegay inuu ciyaaraha ka fariisan doono.
Casillas ayaa ka tirsan kooxda Porto illaa sanadkii 2015-kii, waxaana uu ciyaarihiisa inta badan ku soo qaatay kooxda Real Madrid ee dalka Spain.
Waxa uu xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah taasoo kooxdiisa Porto ka saacidday inay ku dhibco noqdaan kooxda horyaalka Primeira Liga ee Benfica iyadoo ay harsan tahay kaliya siddeed kulan sidoo kalena waxa uu kooxda ku hoggaamiyey siddeed dhammaadka Champions League, iyagoo wajihi doona Liverpool.
Markii uu qandaraaska cusub saxiixay kaddib Casillas ayaa yiri: “Maanta waxa ay ii tahay maalin qaas ah, waxaan dareemayaa in kooxdan inay tahay sida gurigeyga oo kale, waxaan doonayaa inaan halkaan sii joogo illaa aan ka soo gabagabaynayo xirfaddeyda kubadda cagta.”
Laacibkii hore ee Premier League iyo xulka Qaranka Masar Ahmed Mido oo dadka hortooda lagu Jeedaleynayo dalka Sacuudiga....(Muxuu sameeyay??)